Ithegi: ukukhutshelwa kwevidiyo | Martech Zone
Ithegi: ividiyo ekhutshelweyo
NgoMvulo, Juni 28, 2021 NgoMvulo, Juni 28, 2021 Douglas Karr
Siqhubekile sasebenza kwisikhokelo sethu sokwenzela abathengi bethu. Ngelixa siphicotha iincwadi kwaye sinika abathengi bethu into engalunganga kwaye kutheni ingalunganga, kunyanzelekile ukuba sikwanikeze isikhokelo sendlela yokulungisa imicimbi. Xa siphicotha abathengi bethu, sihlala simangalisiwe kumzamo omncinci owenziweyo wokuphucula ubukho babo beYouTube kunye nolwazi olunxulumene neevidiyo abazilayishayo. Uninzi ulayishe ividiyo, usete isihloko,
NgoLwesithathu, nge-6 kaJanuwari 2021 NgoLwesithathu, nge-6 kaJanuwari 2021 Douglas Karr
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ndaye ndabelana nokuba ndiphumeze ukuguqulelwa komatshini kumxholo wam kwaye kwaqhuma ukufikelela kunye nokukhula kwesiza. Njengompapashi, ukukhula kwabaphulaphuli bam kubalulekile kwimpilo yendawo yam kunye neshishini, ngoko ke ndihlala ndikhangela iindlela ezintsha zokufikelela kubaphulaphuli abatsha… kwaye ukuguqulela yenye yazo. Kwixesha elidlulileyo, bendikhe ndasebenzisa iSonix ukubonelela ngokukhutshelwa kwepodcast yam… kodwa banayo
NgoLwesihlanu, Julayi 3, 2020 NgoLwesihlanu, Julayi 3, 2020 Douglas Karr
Ukufuna inkampani ekumgangatho ophezulu yokuguqulela isenokungabi yinto yokuqala ocinga ngayo xa umisela eyona ndlela ungayithatha ukuphucula umkhankaso wakho wokuthengisa ividiyo, kodwa mhlawumbi kufanelekile. Iinkonzo zokukhutshelwa kwevidiyo zinokukunceda ukonyusa ukujonga kunye nokudibana kwababukeli kunye nevidiyo zakho. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ufuna uguqulo oluchanekileyo kwaye ujonge wonke umsebenzi ukuqinisekisa ukuba liguqulelo olusemgangathweni. Umgangatho ophezulu
NgoLwesine, Septemba 19, 2019 NgoLwesine, Septemba 19, 2019 Douglas Karr
Ayisoloko idla ngokuba ndonwabe ngetekhnoloji… kodwa iNkcazo isungule inkonzo yestudiyo sepodcast enezinto ezinomdla ngokwenene. Okona kulungileyo, ngokoluvo lwam, sisakhono sokuhlela iaudiyo ngaphandle komhleli weaudiyo. Inkcazo ikhuphela ipodcast yakho, kunye nokukwazi ukuhlela ipodcast yakho ngokuhlela isicatshulwa! Bendi-podcaster okhutheleyo iminyaka, kodwa ndihlala ndisoyika ukuhlela ii-podcast zam. Ngapha koko, ndivumele udliwanondlebe olumangalisayo